Degso Space Simulator loogu talagalay Windows
Degso Space Simulator
Degso Space Simulator,
Haddii riyadaadu noqoto cirbixiyeen, waa ciyaar jilitaan oo aad ku raaxaysan karto ciyaarista.
Jilitaankan bannaan ee loogu talagalay kombiyuutarradaadu wuxuu noo oggolaanayaa inaan ka qaybgalno hawlgallo bannaan oo kala duwan. Ka sokow hawlgallada booska taariikhiga ah sida Apollo 8, hawlgallo bannaan oo Apollo ah oo dhawaanahan ayaa sidoo kale laga heli karaa ciyaarta. Hawlahaas ka sokow, waxaad adigu dooran kartaa hawl ka duwan tii hore oo aad u ciyaari kartaa ciyaarta sidaad rabto.
In Simulator Space, waxaad kor u qaadeysaa dayax -gacmeedkaaga adigoo raacaya tilmaamaha lagama maarmaanka ah ee dhulka, isku day inaad ka baxdo orbit -ka, u gudub Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare, ku joojiso dayax -gacmeedkaaga saldhiggan ka dibna ku noqo Dhulka. Hawlgalkan aan ka hadlaynaa waa mid ka mid ah ergooyinka kala duwan ee ciyaarta. Inta lagu guda jiro howlgalka, waxaad si xor ah ugu dhex mushaaxi kartaa gudaha dayax-gacmeedkaaga oo aad ku arki kartaa gudaha dayax-gacmeedka oo leh xagal kamarad qofka koowaad ah sida cirbixiyeen. Ciyaartu sidoo kale waxay leedahay qaab roam oo bilaash ah.
Simulator Space, oo ay kujirto Solar System-ka oo dhan, ayaa si kooban u ah ciyaar jilitaan halkaas oo aad uga safri karto Dhulka ilaa Dayaxa oo aad ka daawan karto muuqaalka Dhulka meel bannaan. Shuruudaha nidaamka ugu yar ee Space Simulator waa sida soo socota:
- 2GB oo RAM ah
Space Simulator Noocyada